MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa saaka si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furmay Shirka Amniga Qaranka ee Hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Shirkan oo socon doono mudo labo maalmood ah ka daah-furay xarunta Villa Soomaaliya, iyadoo ay ka qeybgalayaan Madaxweyniyaasha dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, Gudoomiyaha gobolka Banaadir Eng Cabdiraxmaan Yariisow iyo Taliyeyaasha ciidamada xoogga dalka ayaa sidoo kale ku sugan madasha Shirka, kaasi oo diirada lagu saarayo dhisamaha ciidan qaran iyo qodobo kale.
Wararka ayaa sheegaya in madaxda maamullada ay wataan ajande kale oo ah in laga doodo arinta ku saabsan qeybsiga Khayraad iyo dib u eegida Dastuurka, oo looga hadlay Shirkii kan ka horeeyay ee sanadkii tagey ka dhacay Caasimadda.
Saaxiibada Beesha Caalamka ayaa la sheegay inay dhaliilsan yihiin hanaanka uu ku socda geedi socodka in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod 2020-ka iyo in lagu dhisi ciidan qaran oo isku dhafka oo mas'uuliyadda amaanka kala wareega AMISOM.
Xafiiska QM u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha ayaa soo saaray warbixin cusub oo...